Izakhamizi zeHopley leSouthly Ziphuma Ijumo Lokuyabhalisela Ukuvota
Izakhamizi zemzini weHopley eHarare zibhalisela ukuvota
Izakhamizi zeHopley le Southly Park, zihle zaphakamela phezulu ngokuthola ithuba lokuqeliswa kohlelo lwabekhomishini ebona ngezokhetho eye Zimbabwe Electoral Commission – ZEC, olwe BVR Mop Up Exercise, sokubhalisela ukuvota, ngemva kokungenela kwabe Zimbabwe Human Rights Commission, sezehluleke ukuthola incwadi ezidingakalayo emahofisini kaMsitheli.
Lokhu kuza ngemva kokuba lezi zakhamizi, inengi lazo kungasesebatsha, ziye zayatshengisela emahofisini kamabhalane omkhulu kahulumende, umnumzana Tobaiwa Mudede kunsukwana ezisanda kwedlula.
Abakhulumisane lalomsakazo, endaweni yokubhalisela ukuvota eye Hopley Satilite Clinic, baveze ukukhathazeka ngendlela abeZEC abasebenza ngayo, bethi bayaphuza ukusiza abantu, abanye bacine bekhalala.
Unkosazana Lindani Mutasa oleminyaka engamatshumi amabili lasithupha yokuzalwa ngomunye oye wayabhalisa ngemva kokungenela kwabe ZHRC.
Unkosikazi Mutasa uthi ngokwakuqala ukuphatheka kukhetho, ethi okudanisayo yikuthi kulabanye asebehamba besethusela abantu e Hopley, ukuthi bayebhalisa lanxa engathandanga ukubabetha ngamagama.
UNkosazana Kudzai Mukoko wenhlanganiso yeERC
Unkosazana Kudzanayi Mukoko, yisiphathamandla senhlanganiso ezimele yodwa ebona ngamalungelo oluntu endabeni zokhetho eye Election Resorce Centre – ERC. Yenake labanye benhlanganiso yakhe bahamba bebhoda bhoda lapho okubhalisela khona abantu ukuvota, bebona ukuba umsebenzi uqhutshwa kakuhle, uyasizwa na uzulu nxa ethe waya kizo.
Unkosazana Mukoko uthi njenge ERC, bayalujabulela usizo olutholiswa uzulu we Hopley le Southley Park, ngokungenela kwabe ZHRC, osesanelisa laye ukuyabhalisa ukuvota.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla ze ZEC, ngoba zalile lapho zibuzwa ngalendaba yokusebenza kwazo zimadolo nzima.
Inengi labahlala e Southly Park le Hopely kakhulu, kungabantu abaswelayo, abanye kungabakhula bezintandane, baswela lezihlobo ezibasizayo ukuthi bathole lezongcwadi ezibalisa ezokuzalwa kanye lezithupha.
Udaba lwezakhamizi zeHopley siluphiwa nguMavis Gama